トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Horukon futhi ukumisa iqembu
Ngo Horukon bamba, ke kuthiwa basakaza jackpot ngokuzibeka ngeenqhema umshini pachinko e transformer. Ngakho, kuthiwa aphumelele Horukon bamba, ngifuna ukubona ukuthi hlobo luni izinto ngobudlelwane phakathi Horukon namaqembu. umshini pachinko iye zixhunywe a transformer ukuze bathole kwamandla.
ngesibalo axhunyiwe ngu transformer, ukubizwa ngokuthi behlukaniswa ngamaqembu amane kuya kweyisihlanu. Noma isibe iqembu enmbololweni ukuphela, noma uye abe iqembu ohlangothini-by-side inombolo ye-serial, kubonakala sengathi yokuthi kokubili seyemukeliwe.
Okokuqala, uma sekuyisikhathi ufuna ukucisha big hit, ngokuvumelana umthetho othile, Horukon okungukuthi, ngiyathanda enza ukwahlulela jackpot. Kuziwa kunqunywa jackpot nesenzakalo isikhathi, Horukon ivuliwe nsuku iqembu, ukudweba iqembu ukuze ukhiqize big hit.
Eqenjini ukuthi iwine, ngayibamba iqala ukwenzeka, ngaphakathi eqenjini lapho jackpot unikwe, wukuthi ezithile isikhathi jackpot uyaphuma. Ngaphezu kwalokho, e-Horukon, ukuze senze ibhola aphume wonke pachinko emakhazeni ngokwesilinganiso, degree of elivela kuzo isikhathi kanye big hit ukuze ukhiqize big hit, kuye kwashiwo ukulawula.
leyo, noma baphume kuyinto nokuchema iqembu ukuthi jackpot singase sivele nini, ukubikezela iqembu ukuthi big hit esilandelayo kuzokwenzeka, ngoba Neraiuchi iyona Horukon bamba.
futhi usebenzise uhlelo sobuso ubuqiniso, kanti ukukhetha umuntu elikhiphe nangempela ngayibamba, futhi kokuqagela sekujwayelekile ukuthi ukwenza ilotho iqembu.